I-Federal & State Marijuana nezibuyekezo ze-Hemp - Izindaba zeCannabis Legalization
Izindaba zeCannabis Legalization - NgoLwesithathu @ 2:00 pm CST
Uma ufuna ukuthola Izindaba ze-Canannis Legalization - Usufike endaweni efanele!
Uqale isiteshi se-YouTube, i-Cannabis Legalization News, ngonyaka we-2018, kanye nale webhusayithi nokwenza kwakhe umthetho. Ngakho-ke izinyanga ezimbalwa zokuqala zaziyindida - kepha manje kumakhasimende nezithameli, kukhula ngokushesha - mhlawumbe ngoba kukunika okuthile ongakulangazelela isonto ngalinye.
Njalo ngoLwesithathu ngehora lesibili ntambama, eCentral Time, Ummeli weCannabis, uTom, nentatheli kusuka WeedNews.Co, Miggy, hlanganani ukuze nixoxe ngesonto Izindaba ze-Canannis Legalization. Amukela amalungu e-cannabis indstury asemthethweni ukuze axoxe ngebhizinisi lawo nangezinguquko zomthetho ezidingekayo ukulungisa amashumi eminyaka enqubomgomo embi. Ake sixoxe kabanzi - kepha okokuqala…
Xhumana nathi Abameli beCannabis
Uma ufuna ukukhulisa i-hemp e-Illinois - gcwalisa i-bot bot kule webhusayithi - noma ushayele abameli bethu be-cannabis namuhla e- (309) 740-4033
Izindaba Zomthetho Zakamuva
Isonto ngalinye, siphinda sifunde lokho obehlile emlandweni wokuqeda ukunqatshelwa kwe-cannabis okudale ingozi enkulu kunokuhle eminyakeni engama-80 edlule.
Kondla bukhoma ngoLwesithathu ngamunye ngehora lesibili ntambama - isikhathi esimaphakathi. Yibuke bukhoma bese ubuza imibuzo yakho noma ubeke imibono yakho. Akugcini ngokuthi iphume bukhoma ku-YouTube, kodwa nakuFacebook. Nakhu ukuthi ungayibamba kanjani kalula:
Noma Njengathi ku-Facebook bese uyibuka bukhoma lapho ku:
Noma mhlawumbe ufuna uhlobo lwePodCast:
Yilokho konke okudingeka ukwenze ukubuka ukusemthethweni kwenziwe njalo isonto ngalinye. Uthole ithuba lokufakaza umlando - futhi futhi usize ngokuzibandakanya ushintsho lomthetho ngokwakho. Kepha uthola ini ukuthi ubheke phambili ekubhaliseleni kwakho - okuyinto yamahhala ngemuva kwalokho - ezindabeni ze-Cannabis Legalization News?
Ngaphezu kokuphakelwa kwezindaba zamasonto onke, ummeli wethu we-cannabis uvame ukwenza ama-YouTubes wangempela ngemithetho nenqubomgomo ye-cannabis. Ikakhulu ezingeni federal.
Nazi ezimbalwa azenzile:
Izindaba ze-420 ngokusobala ziseshwa izikhathi ezingaphezu kwama-200 ngenyanga - futhi uma usesha lelo gama futhi wagcina ulapha - wamukelekile, ngiyajabula ukuba nawe.
Umsebenzi wethu lapha ukwenza isiqiniseko sokuthi uthola izindaba zakho ezingama-420 - sibheka lezi zindaba njengokuthi "zi-fluff" kunezindaba zangempela nokuhlaziywa uma kuziwa ekushintsheni kwemithetho ye-cannabis e-United States nasemhlabeni.
Izindaba ze-420 zibhekisela ohlangothini olumnandi kakhulu lwezindaba ze-cannabis. Kwesinye isikhathi sixoxa ngokuthi imithethonqubo ingajabulisa kanjani. Izitolo ze-cannabis ezikhulisa futhi zisebenzele umphakathi.
Imincintiswano ye-cannabis ekhona lapho ibiza ukuthi yiwuphi umthwalo ongcono kakhulu.
Izinto ezinhle, kodwa azibalulekile njengokuthi kwenzekani ukusiza ukuguqula umthetho olimaze abantu abaningi, kepha awusindanga. Lokho yizindaba ezingama-420.
Kuhle ukuba nakho ngoba kukhombisa uhlangothi olungenaphutha lwalokho esizama ukukwenza, kepha okuqukethwe kwethu okuningi kuzoba ekushintsheni komthetho namabhizinisi ngaphandle komkhakha we-cannabis nokuthi abakwenzayo kuthuthukisa kanjani izimpilo nemithetho kuyo yonke le ndawo Melika, kanye nomhlaba.
Thola Okufakiwe ku-Cannabis Legalization News
Uma ungumkhakha we-cannabis - singathanda ukukhuluma nawe. Asikhulume. Ngilandele ku-Linked'in
Noma sebenzisa enye yezinkinobho eziningi zokuxhumana noma zokushayela kuleli khasi lewebhu ukuze uthintane - futhi mhlawumbe sizokukwenza -
Izindaba zeCannabis Legalization!
Uma ukuthandile lokhu okuqukethwe, noma wazi othile ongakuthola kuthakazelisa - sicela ucabangele ukwaba.